05B « MMWeather Information BLOG
မုန်တိုင်း LEHAR-05B ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ပိုမိုအားကောင်းလာမည်
By mmweather.ygn, on November 25th, 2013%
နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၉း၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် JTWC warning-8 တွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း LEHAR(05B)သည်အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်(Heading 300 degrees သို့ 18 km/h နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားလျှက်ရှိပြီး မုန်တိုင်းဗဟို၌ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ 113 km/h to 137 km/h (70.21 mph to 85.12 mph) အထိရှိကာ လှိုင်းအမြင့် ၁၇ ပေ ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကိုးကျွန်းလေဆိပ်၏ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၁၇ဝခန့်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ချင်နိုင်း(CHENNAI)မြို့ အရှေ့ဘက် ၇၈၅ မိုင်ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်တွင် တည်ရှိနေကြောင်း သိရပါသည်။
WUND Movement: . . . → Read More: မုန်တိုင်း LEHAR-05B ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ပိုမိုအားကောင်းလာမည်
Leaveacomment Uncategorized အဆင့်-၃ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအထိ ဖြစ်လာနိုင်မည့် 05B
နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီ နောက်ပိုင်းတွင် အဆင့်-၁(CAT-1)ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အဆင့်ဖြင့် . . . → Read More: အဆင့်-၃ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအထိ ဖြစ်လာနိုင်မည့် 05B
9 comments Uncategorized Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum